Agromart | Agricultural Marketplace Nepal भेडेखुर्सानीको खेती गर्ने तरिका – Agromart
Q 1. भेडेखुर्सानीको लागि कस्तो हावापानी उपयुक्त हुन्छ ?
Q 2. यसको खेती गर्न कस्तो माटो उपयुक्त होला ?
पानीको निकास राम्रो भएको, माटोको पि.एच मान ५.५-६.५ भएको, खुकुलो र प्राङ्गारिक पदार्थ प्रशस्त भएको दुमट माटो उपयुक्त मानिन्छ। बलौटे माटोमा प्रशस्त गोबर मलको प्रयोग र सिंचाई व्यवस्था मिलाउन सके भेडे खुर्सानी खेती राम्रो हुन्छ।
Q 3. भेडेखुर्सानी खेती गर्नको लागि प्रति रोपनीआवश्यक वीउ/बेर्ना कति हो?
Q 4. भेडेखुर्सानीका जातहरु के के छन् ?
Q 5. क्यालिफोर्निया वण्डर जातको विशेषता के हो ?
Q 6. भेडेखुर्सानी बाली लगाउने र बाली लिने समय कहिले हो ?
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा प्लाष्टिक गुमोज/घर भित्र वा खुला खेतमा विभिन्न समयमा भेडेखुर्सानी खेतीगर्न सकिन्छ। तराईमा हिउँदे बालीको रुपमा भाद्र-आश्विनमा बेर्ना सारेर कात्तिक-चैत्रमा बाली लिन सकिन्छ भने मध्य-पहाडमा बसन्ते बालीको रुपमा माघ-फाल्गुणमा लगाएर बैशाख-आषाढमा र उच्च पहाडमा वर्षे बालीको रुपमा प्लाष्टिक घरभित्र बैशाख-जेष्ठमा बाली लगाएर श्रावण-कात्तिकमा बाली लिन सकिन्छ।
Q 7. एक रोपनीमा भेडेखुर्सानीको खेती गर्न कति क्षेत्रफलको नर्सरी ब्याड बनाउनु पर्छ?
Q 8. सोलराइजेशन भनेको के हो र यो कसरी र किन गरिन्छ ?
Q 9. भेडेखुर्सानीको बिरुवा नर्सरीमा कसरी उमार्ने होला ?
माटोमा६ के.जी. राम्ररी पाकेको गोबर मल, १५० ग्राम डि.ए.पि. र १०० ग्राम पोटाश मल मिसाई ब्याड तयार गर्ने। सोलराइजेशन गरेपछि तयारी ब्याडमा १० से.मि.को दुरीमा सिधालाइन कोरी २ से.मि. को फरकमा २/२ वटा बीउ खसाली हल्का माटोले लाइन छोपी पराल वा पतलो बोराले पुरै ब्याड छोप्ने र हजारीले माथीबाट सिंचाइ गर्ने।बेर्ना उम्रन थाले पछि पराल/बोराको छापो हटाई दिने। भेडेखुर्सानीको बेर्ना उम्रेको २५ देखि ३० दिनमा ६ पाते र १० से.मि.अग्लो भएपछि खेतमा सार्न तयार हुन्छ।
Q 10. भेडेखुर्सानीको लागि जमिनको तयारी कसरी गर्ने ?
Q 11. भेडेखुर्सानीको बेर्ना कसरी रोपिन्छ ?
Q 12. भेडेखुर्सानी बालीमा मलखादको व्वयस्थापन कसरी गरिन्छ ?
राम्रोसँग कुहिएको गोबर मल १-१.५मे.टन, यूरिया ७ के.जी.,डि.ए.पि. ७ के.जी., म्यूरेट अफपोटाश ५ के.जी. प्रति रोपनीका दरले हाल्नु पर्दछ। सिफारीश गरे अनुसारको कम्पोष्ट/गोवरमल,डि.ए.पि. र पोटाश मलको पुरै भाग र यूरियाको आधा भाग जमिन तयार गर्दा नै माटोमा मिलाउनुपर्दछ। बाँकी बचेको यूरियाको आधाभाग बेर्ना सारेको ३० दिन र ६० दिनपछि दुई पटक गरी टप-ड्रेसिङ्ग गर्नुपर्दछ। यसैगरी भेजिमेक्स १ मि.लि. प्रति ३ लिटर पानीका दरले बेर्ना रोपेको ७-१० दिनमा पहिलो पटक र त्यसपछि १५ दिनको फरकमा ४-५पटक छर्नुपर्दछ।
Q 13. प्लाष्टिक घर भित्र लगाईएका भेडेखुर्सानी बालीमा मलखादको व्वयस्थापन कसरी गर्ने ?
प्लाष्टिक घरभित्र लामो समयसम्म बाली लिन थप टप-ड्रेसिङ्ग गर्दा डि.ए.पि. २ ग्राम,युरिया २ ग्राम र पोटाश २ ग्राम प्रतिबोटका दरले बेर्नाको चारैतिरबाट जरालाई नछुने गरी मल दिई माटोमा मिलाई दिनुपर्दछ।प्लाष्टिक घर भित्र खेती गरिएको भेंडेखुर्सानीलाई मल्टिप्लेक्स वा एग्रोमिन ३ मि.लि. प्रतिलिटर पानीका दरले मिसाई छर्दा अझ राम्रो उत्पादन भएको पाइएको छ।
Q 14. भेडेखुर्सानीमा सिचाईको महत्व कस्तो रहन्छ ? कुन कुन अवस्थामा सिचाई गर्नु पर्दछ ?
Q 15. भेडेखुर्सानी बाली रोपाई पछिको हेरचाह कसरी गर्ने ?
Q 16. भेंडेखुर्सानीमा लाग्ने मुख्य मुख्य कीरा तथा रोग कुन कुन हुन् ?
Q 17. थ्रिप्सले बालीलाई कसरी नोक्सानी पुर्यानउँछ र यसको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
Q 18. फामोप्सिस डढुवा रोगका लक्षण के के हुन् र यसको नियन्त्रण कसरी गरिन्छ ?
शुरुमा माटो छोएका पातहरुमा दागहरु देखा पर्दछन्। पछि डाँठमा समेत आक्रमण गरी बोक्रा खैरो रङ्गको भै सड्दछ। फल बाहिर गडेका पहेंला दागहरु र भित्र पुरै सुख्खा किसिमले सड्दछ। नीममा आधारित विषादीको प्रयोग गर्ने अथवा डाइथेन एम ४५ विषादि२ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्न सकिन्छ।
Q 19. राम्रो व्यवस्थापन गरेको भेडेखुर्सानी खेतीवाट प्रति रोपनी कतिसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ ?
Q 20. भेडेखुर्सानीफल कहिले तयार हुन्छ र फल कसरी टिप्ने गरिन्छ?
Q 21. फल टिपी सकेपछि कस्तो ठाउँमा राख्नु पर्दछ ?
Q 22. भेडेखुर्सानी फल ग्रेडिङ्ग गर्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ?
Q 23. भेडेखुर्सानी फल प्याकिङ्ग गर्दा कुन सामग्री प्रयोग गर्नु पर्दछ ?
Q 24. भेडेखर्सानी फललाई कति दिन सम्म भण्डारणगर्न सकिन्छ ?
Q 25. टाढा ढुवानी/वजारको लागि कस्ता–कस्ता उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्दछ?
Q 26. भेडे खुर्सानीका जातहरु कुन –कुन हुन् ?
Q 27. भेडे खुसार्नीको प्रयोग कसरी गरिन्छ ?
नेपालमा भेडे खुसार्नीको हरियो फलको प्रयोग गरिन्छ । भेडे खुर्सानीको सलाद, पकाएको तरकारी वा अचार बनाएर प्रयोग गरिन्छ । यसको बासना र स्वाद धेरैलाई मीठो लाग्दछ ।
Q 28. भेडे खुर्सानीमा के के पाईन्छ ?
भेडे खुर्सानी पोषिलो फल तरकारी हो । यो खुर्सानी भिटामिन “ए” र “सी” मा निकै धनी छ ।
Q 29. भेडे खुर्सानीको औषधीय गुण के हो?